Home News Shirkada DP World oo xaalad adag lasoo daristay iyo Jabuuti oo sabab...
Shirkada DP World oo xaalad adag lasoo daristay iyo Jabuuti oo sabab u noqotay
Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lasoo darsay culees dhinaca maalgashiga ah iyo helitaanka lacago amaah ah oo ay ka hesho bangiyada caalamiga si ay maalgalin ugu sameyso.
Maamulka Shirkada DP World ayaa sheegay in dhibaato xoogan kasoo gaartay dacwadii ay la galeen dowlada Jabuuti ee ku adaaneyd murankii ka dhashay heshiiskii ay kula wareegeen maamulka dekadda Dooraale .
Guddoomiyaha Shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Sulayem ayaa sheegay in go’aankii dowlada Jabuuti uga baxday heshiiskii Dekadda Dooraale ay dhaawacday sumcadii ay shirkadu laheyd.
Waxa uu uu sheegay in Bangiyadu ay walaac ka qabaan sida loo damaanad qaadayo in hadii ay shirkadda lacag amaahiyaan si lo maalgeliyo iyo in dowladuhu ay qaataan Go’aanka Jabuuti oo kale ayna qaataan mashaariicdii ay fulin jirtay Shirkadda DP World.
Shirkada DP World ayaa hada maamusha dekaddo badan oo kuyaala qaarada Afrika ay ku jiraan dekaddaha Berbera iyo Boosaaso, waxaana shirkada khasaaro iyo magac xumo kala kulantay dekadda Jabuuti oo ay ku fashilantay in ay maamusho.